सामुदायिक सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सामुदायिक सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
पछिल्लो समय सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कदै गएको छ । केही बर्ष देखि सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यार्थीको संख्या पनि न्यून हुँदै गएका छन् । सामुदायिक बिद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कनु, ब्यबस्थाप फितलो हुनुलगायतले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । जसले गर्दा सामुदायिक बिद्यालय प्रतिको आकर्षण घट्दै गईरहेको अबस्था छ । यस्तो अबस्थामा सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला भनी केही शिक्षाबिज्ञहरुको प्रतिक्रिया लिएका छौं ।
प्रमोद न्यौपाने, नेपाल शिक्षक महासंघ
शैक्षिक सुधारका लागि बिद्यार्थी मैत्री कक्षाकोठा, निःशुल्क खाजा, स्वास्थ्य तथा परामर्स सेवाको ब्यबस्था गर्ने, शैक्षिक प्रणालीको नियमित निरीक्षण, सुपरीबेक्षण, पुनरावलोकन र मूल्यांकन गर्ने, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक सशक्तिकरण गर्ने, बिद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने, जिम्मेवार शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि प्रयाप्त बजेट र बिनियोजन गर्ने, राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्ततीहरुलाई सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना गर्ने, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य गरेमा सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि हुन्छ । माथि उल्लेखित कार्यका अतिरिक्त भौतिक सुबिधा शिक्षण सिकाई, वातावरण, बिषयबस्तुका साथै नीतिगत सुधार जस्ता बिबिध पक्षहरुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न सकेमात्र सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ ।
बिष्णुकुमार देवकोटा शिक्षाबिद
शैक्षिक सुधारका लागि सरकारको स्पस्ट नीति हुनुपर्छ । शिक्षामा संघीय सरकार, स्थानी सरकार तथा प्रदेश सरकारको भूमिका निश्चित हुनुपर्छ । बिद्यालयको भौतिक सुधार, कक्षाकोठालाई प्रबिधियुक्त बनाउनु पर्छ । शिक्षक नियुक्ति बृति बिकास, कक्षाकोठा भित्रको शिक्षण सिकाई , अतिरिक्त क्रियाकलालाई जोड दिनु पर्छ । शिक्षकलाई सहज रुपमा पढाउने बाताबरण मिलाउनु पर्छ । शैक्षिक पात्रो बनाउनु पर्छ । र त्यही अनुसार क्रियाकलाप हुन आबश्यक छ । साथै सोही अनुसार गतिबिधि भए, नभएको अनुगमण आबश्यक छ । समस्या समाधानका लागि सबै सरकारले पहल थाल्नु पर्छ । समस्या प्रक्रियागत रुपमा सुधार गर्नुपर्छ । प्रािबिधि र ब्यबस्थित शिक्षालाई राष्ट्रिय र अन्तराष्टिय बजारसंग दाँजेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षामा केन्द्र देखि स्थानीय स्तर सम्मको राजनीतिलाई बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षाका लागि २० प्रतिसत बजेट छुट्याउनु पर्छ ।
भास्कर गौतम, शिक्षा शाखा प्रमुख तुलसीपुर,
बिद्यालयमा प्रबिधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाई हुनुपर्छ । अब पुरानो पद्धतिबाट शिक्षण सिकाई सम्भब छैन् । त्यसैले नयाँ पद्धति अबलम्बन गर्नुपर्छ । पठन पाठनका लागि शिक्षक र बिद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया हुन जरुरी छ । शिक्षकले पुरा घण्टी पढाउनु पर्छ । बिद्यार्थीलाई गृहकार्य दिने पद्धतीको बिकास हुनुपर्छ । कक्षा कोठााको ब्यबस्थापनलगायतका बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बिद्यालयमा नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप हुनुपर्छ ।
रमेश मैनाली, शिक्षा बिभाग
सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन निजि बिद्यालयको शैक्षिक स्तरसंग भिन्नता नहुने गरी सुधार ल्याउनु पर्छ । पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन र शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधानका निम्ति स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
सबै भन्दा पहिले दरबन्दी मिलान, बिद्यालय मर्ज, विविध शिर्षकमा बिद्यालयलाई दिइदै अनुदान बृद्दि, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने , प्रत्येक शिक्षकलाई ३ वर्षमा सरुवा गर्ने, बिद्यालय अनुगमन,निरिक्षणलाइ निरन्तर गर्ने, शिक्षा सचिवदेखि सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक समेतले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक बिद्यालयमा नै पढाउने, राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाइ पुरस्कृत गर्ने, माप दण्ड पूरा नगर्ने शिक्षकलाइ कारबाही गर्ने, शिक्षकहरुका सेवा सुबिधा निजामती कर्मचारी सरह गर्ने, हरेक २ बर्षमा आयोगबाट स्थायि पदपुर्ति गर्ने , उमेर ५०,सेवा २५ बर्षलाइ अनिबार्य गर्ने, तह अनुसार एकै खाले शिक्षकको ब्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अन्ततः WHO ले स्वीकार गर्यो मदीना मुनव्वरा विश्वकै स्वस्थ शहर
कैलालीको पहलमानपुर लालबोझी सडक खण्ड मर्मतको माग गर्दै प्रदर्शन
लहान मेयरको अटेरीको कारण नेपाली कांग्रेसले बिरोध प्रर्दशन
२५ जेठभित्र कर बुझाउन करदातालाई सरकारको ताकेता, नबुझाए जरिवाना